मानिसको चरित्र बनाउने धेरै आधार हरु हुन्छन। ति धेरै आधार मध्ये मानिसको चरित्रलाई खुट्टाको औंलाले संकेत गर्ने गर्छ । तेस्तै आधारमा टेकेर हामि मान्छेको चरित्र यसरि पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। ठूलो औंला: खुट्टाको ठूलो औंला…
चीनको सिचुवान प्रान्तका एक धनाढ्य किसानलाई थुप्रै गाउँबाट हाँस र कुखुरा चोरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । उनले हाँस र कुखुरा चोर्नुको उद्देश्य भने निकै रोचक छ । वास्तवमा उनले ३ करोड २२ लाख पर्ने…
June 12, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
न्युज २४ टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगका प्रस्तोता तथा पत्रकार रवि लामिछाने को स्केच तयार पारि एक युवती लामिछानेलाई भेट्न सिधाकुरा जनता कार्यालयमा पुगेकी छिन्। रबि लामिछानेका फ्यान रहेकी ति युवतीले कडा मेहेनत गर्दै…
June 9, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
जर्मनीमा यस्तो कुकुर छ जो अरबपति धनि छ। आफैमा सुन्दा अचम्म लाग्ने यो कुरा सायदै बिस्वास लाग्ला। तर यो सत्य हो। जर्मन निवासी उक्त कुकुरको नाम गंथर हो। अमेरिकन डलर मा ति कुकुर संग करोडौ…
June 5, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
युट्युब च्यानलबाट पैसा कमाउन र भिडियो भाइरल बनाउन तथा लागि युट्युबरहरुले अनेक खालका हर्कत गरेर भिडियो अपलोड गर्ने गर्दछन् । यस्तैमा एकजना युट्युबरले बिस्कुटमा क्रिमको साटो दाँत माझ्ने पेष्ट राखेर एकजना घरबारविहीन मानिसलाई खान दिए…
पत्रकार तथा स्पस्ट बक्ता रमेश प्रसाई फेरि गर्जिएका छन्। नेपालीका लागि नेपाल अभियानका अभियन्ता र भ्रस्टाचार बिरोधि अभियानमा सक्रिय भनेर लागिरहेका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई छिट्टै भेट्न आउने बाचा गरेका हुन् । आक्रोशित बन्दै गर्जिएको उनको…
June 4, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
यिनी हुन् सबिना मगर। कम्पुटरले प्रिन्ट गरे जस्तो उत्कृस्ट अक्षर लेख्ने क्षमता भएकी नेपाली बालिका। अक्षर त हर कोहि लेख्छन तर कम्प्युटरको जस्तो एकनास र उत्कृस्ट लेखन गर्न सक्ने मानिस बिरालै भेटिन्छन। यी बालिकाको अक्षर…
माउन्ट भिउ इंगलिस बोर्डिंग, बालकोट भक्तपुर स्कुल कक्षा ७ मा पढ्ने अंकित संग्रौलाले आफ्नो बाल बच्चाहरुको साइकोलोजीको बारेमा एकदम महत्व पूर्ण तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनले यस्तो बताइरहदा उपस्थित अभिभाबकहरु शान्त भएर निकै मन लगाएर…
June 3, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
अब देखि बिबाहको निम्तो पत्रमा बेहुला बेहुलीको उमेर खुलाउनु पर्ने भएको छ। यो नियम सिन्धुलीमा लागु गरिएको हो। बाल बिबाह जति गरे पनि कम गर्न नसकेपछि सबै स्थानीय तहले मिलेर यस्तो नयाँ उपाय लगाएको हो।…
June 2, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
दाङ्गको तुलसीपुरका सर्बसाधारण बीच निकै चर्चित रहेकी १६ वर्षे सुन्दरी माता पहिलो पटक मिडियामा आएकी छिन्। सर्बसाधारणले निकै तारिफ गरे पछि अन्तर्वार्ता लिन आएको भन्दै अन्तरबार्ता लिएको थियो। माताले पनि आफुले पाएको सक्ति र जान्न…
काफल बेच्दै आफ्नो अध्ययन गर्दै गरेकी २२ बर्षीय गीता खत्रीलाइ सम्मानित गरिएको छ। काफलवालीको नाम ले समेत चिनिएकी गीता खत्रीले गाउमा काफल बेचेरै मनग्गे आम्दानि गरेपछि उनि सबैका लागि उदाहरनिय बनेकि छिन। यसै कारण तुसारेपानी…
June 1, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
पाँच सय किलोमिटर दूरी १६ दिन लगाएर दौड मार्फत् पूरा गर्न साहित्यकार लक्ष्मण सापकोटाले लागेका छन्। उनले ५ सय किलोमिटर लामो ‘प्रथम नमोबुद्ध-लुम्बिनी साहित्यिक दौड’ यात्रा सुरु गरेका छन्। साहित्यकार सापकोटाले काभ्रेपलाञ्चोकको प्रसिद्ध तीर्थस्थल नमोबुद्धबाट…
हात नभएकी एक महिलाले बिमान उडाउछिन भन्ने सुन्दा तपाइलाइ बिस्वास नलाग्ला। उड्नको लागि पंखाको होइन, हौसलाको आवश्यकता पर्छ भन्ने उनले प्रमाणित गरेकी छिन। उनी नै हात नभएको पहिलो महिला पाइलट हुन्। जसले अत्यन्तै सजिलो तरिकाबाट…
कोहि मानिस गेम प्रति कति सम्म क्रेजी हुन सक्छ ? अझ बिशेष गरि पब्जी गेमको बारेमा त कुरा गरि साध्य नै छैन। यस्तै एक घटना सार्बजनिक भएको छ । संसारको कतिपय देशमा प्रतिबन्ध समेत लागिसकेको…
पढ्ने मानिसलाई केहि बहानाले छेक्दैन भन्ने उदाहरण बनेकी छिन गीता खत्री। पढ्दै काफल समेत बेचेर मनग्गे आम्दानी गर्दै आएकी यी खत्रीलाइ कदर गर्दै सम्मान गरिएको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर – ६ को…
बन जंगलको महत्व मानबका लागि कति छ भन्ने कुराको बयान गरि नै साध्य छैन। दिनहु जंगल फाडिने काम तिब्र रुपमा भैरहेको छ । वन जंगल जोगाउन दुनिया भर बिभिन्न उपाय गरिदै आएपनि फिलिपिन्समा भने अनौठो…
एक बर्षकी बालिकाको पौडिने अद्भुत कला, संसारभर भाइरल बन्दै ( भिडियो )
May 29, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मात्र १ वर्षका बालिकाले अद्भुत तरिकाले पौडी खेल्छिन भन्ने सुन्दा तपाइलाइ बिस्वास लाग्ला ? पक्कै पनि लाग्दैन , गारो हुन्छ बिस्वास गर्न। तर यो कुरा भने सत्य हो। यी सानी बालिका अद्‍भूत कलाका धनी छिन।…
यस्तो छ दुनियाँकै सबैभन्दा महँगो कफी , कति छ मूल्य ? हेनुस
तपाईंहरु होटल रेष्टुरेन्ट मा पुगेर कफी पिउनु भएको होला। कफीका पनि प्रकार हुन्छन त्यस अनुसार कफीको पनि मूल्य फरक फरक हुन्छन। सबै भन्दा महँगो कफी कुन होला ? त्यसको मूल्य कति पर्छ होला। दुनियाकै सबैभन्दा…
हेटौंडाबाट आइतबार राति चितवन आएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यतालिका सोमबार बुटवल जाने थियो । तर, उनी विप्लवको बन्दका कारण भरतपुरमै रोकिए । बन्दका कारण भरतपुरमा रोकिएका कुलमानले समयको सदुपयोग गरे…
यस्तो छ गोलभेँडा खानुको फाइदै फाइदा ! जानी राख्नुस
तरकारीलाई स्वादिलो बनाउन आजभोलि गोलभेँडाको प्रयोग अनिवार्य जस्तै भएको छ । अचार तथा सुपको लागि यो नभई हुँदैन । गोलभेँडामा भिटामिन सी, लाइकोपीन, भिटामिन, पोटासियम पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । यसको प्रयोगले कोलेस्ट्रोल कम गर्न पनि…